02/01/2021 - 03/01/2021 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက်အင်အားသုံးမှု ကုလလူ့အခွင့်အရေးရုံး ရှုတ်ချ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြသူတွေအပေါ် အင်အားသုံးတာ ချက်ချင်းရပ်ဖို့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံးက စစ်တပ်ကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်နေတဲ့အပေါ်လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန် ပြစ်တင်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံး ပြောခွင့်ရ Ravina Shamdasani က ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းက နေရာတော်တော်များများမှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြနေကြသူတွေကို ရဲနဲ့ စစ်တပ်က သေစေလောက်တဲ့ အင်အားနဲ့ရော အသက်သေစေလောက်အောင် မပြင်းထန်တဲ့ အင်အားတွေနဲ့ပါ ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်တဲ့အတွက် ၁၈ ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီး ၃၀ လောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ သတင်းတွေကို ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံးက ရရှိထားတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြိတ်၊ ထားဝယ်၊ ပဲခူးနဲ့ ပခုက္ကူမြို့တွေမှာ လူအုပ်ထဲကို ကျည်အစစ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ သေဆုံးသူတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိထားတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောပါတယ်။ နေရာတော်တော်များများမှာ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ၊ အာရုံကြောကို ရုတ်တရက် ထိခိုက်စေတဲ့ flash-bang တွေ stun grenade တွေ အသုံးပြုတယ်လို့ သိထားတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင်နဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြန်ရအောင် တောင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် သေစေလောက်တဲ့ အင်အားသုံးတာဟာ နိုင်ငံတကာ ဘယ်လူ့အခွင့်အရေးစံနဲ့မှ ဖြေရှင်းလို့ မရဘူးလို့လည်း ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံး ပြောခွင့်ရ Shamdasani ကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်၊ ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးပါလို့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ထပ်တောင်းဆိုထားသလို၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြန်ရအောင် ကြိုးစားနေသူတွေ၊ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ တသားထဲရပ်တည်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ပြသရမယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
မြန်မာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ကြောင်း ထိုင်ဝမ်မှာဆန္ဒပြ
မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ တိုင်ဝမ်MilkTea Alliance ဆန္ဒပြမြင်ကွင်း။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ အတူရပ်တည်တယ်ဆိုတာ ပြသတဲ့အနေနဲ့ ထိုင်ဝမ်မှာလည်း ဒီနေ့ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ ထိုင်ဝမ်တို့က ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဖွဲ့ထားတဲ့ Milk Tea Alliance မဟာမိတ်အဖွဲ့က ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဆန္ဒပြကြဖို့ ဆော်သြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ရောက် မြန်မာတွေ၊ ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေစုစုပေါင်း ရာဂဏန်းလောက်ရှိတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ထိုင်ပေမြို့မှာချီတက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြကြသူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တဲ့ ပိုစတာတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံက CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်သူတွေကိုထောက်ခံတဲ့ စာတန်း ရုပ်ပုံတွေကိုင်ဆောင်ပြီး ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားနေရတာကို မကြည့်ရက်လို့ ဆန္ဒလာပြတာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနွယ်ဖွားတယောက်က မက်ဒရိန်းဘာသာနဲ့အခုလို ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သွေးထွက်သံယို အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းနေတာတွေ မြင်တွေ့နေရတာ အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားမျှတမှုရှိပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရလက် အာဏာပြန်ရောက်တာမြင်ချင်တယ်လို့ ဒီနေ့ ထိုင်ဝမ်က ဆန္ဒပြသူတွေက ပြောကြပါတယ်။ Milk Tea Alliance အဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လဖက်ရည်သောက် သပိတ်မှောက်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီနေ့မှာ ကမ္ဘာဝန်းမှာရှိနေကြတဲ့ မြန်မာတွေကလည်း စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကို အွန်လိုင်းကနေ ပါဝင်နေကြပါတယ်ရှင်။
ဦးကျော်မိုးထွန်း မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်ရှိနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြော
ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်ရှိနေဆဲပဲလို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိတစ်ဦးကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက် ဒီနေ့ ဖော်ပြပါတယ်။
အစိုးရ အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂကို တရားဝင် အကြောင်းကြားလာတာ မရှိသေးတဲ့အတွက် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရသစ်အဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုမထားဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရသူ စတက်ဖ်နီ ဒူဂျာရစ်ကလည်း… မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာဘက်က ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားလာတာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိသေးဘူးလို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ကလည်း ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်ရှိနေဆဲပဲလို့ ဒီကနေ့ညပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို အပြင်းထန်ဆုံး အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက ဖေ‌ဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးမှာ တိုက်တွန်းထားတာပါ။
ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် နောက်တစ်ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဦးကျော်မိုးထွန်းကို နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်အဖြစ် စွပ်စွဲပြီး ဝန်ထမ်းအဖြစ်က ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံတကာ မြန်မာသံရုံးတွေ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတွေမှာရှိတဲ့ သံမှူးတွေ၊ သံရုံးအုပ်တွေ၊ သံရုံးစာရေးတွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ကို ပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွေလည်း အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်မှာ ပေါက်ကြား ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။
သံမှူးအသစ်တွေ အစားထိုးခန့်အပ်တဲ့ နောက်ထပ် အမိန့်ကြော်ငြာစာတစ်စောင်မှာတော့… ကူဝိတ်၊ ပါကစ္စတန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နဲ့ ဩစတြီးယားသံရုံးတွေမှာ သံမှူးကြီးအသစ်တွေ ခန့်ထားလိုက်ကြောင်းနဲ့၊ နယူးယောက် ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံး သံမှူးအဖြစ် ဦးထွန်းနောင် ဆိုသူကို ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားလိုက်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
" အမလုပ်တာ ဘာမှမရှိတာ။ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ အချဉ်ပေါင်းဝေတာပဲရှိတာ "
မတင်တင်အေးသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က ဈေးရောင်းနေစဉ် အိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် ယခင်ရက်များက ဆန္ဒပြလူထုကို ၎င်းရောင်းချသော အချဉ်ပေါင်းများ လိုက်လံဝေငှ ကျွေးရာမှ လူမှုကွန်ရက်ဖေ့စ်ဘွခ်တွင် ၎င်း၏ စေတနာအပေါ် လူအများက တုန့်ပြန်ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။
MGZ- မနေ့က ဖမ်းခံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပြောပါဦး။
TTA- မနေ့က ဗိုလ်ချုပ်လမ်း မိတ်ဆက်လမ်းထိပ်က အမသစ်သီးဆိုင်မှာကူနေတာ။ သူတို့က လိမ္မော်သီးတွေ သိမ်းသိမ်းဆိုတော့ လိမ္မော်သီးတွေက တစ်ယောက်တည်း သိမ်းလို့မပြီးဘူး၊သုံးလေးယောက်သိမ်းမှပြီးတဲ့ဟာလို့ ပြောတာ။ အဲလို ပြောရမလားဆိုပြီး ဝိုင်းရိုက်တယ်။အထဲထိကို ဝင်ရိုက်တာ။ အရပ်ဝတ်နဲ့တစ်ယောက် သူပဲသူပဲ ဆိုပြီး လေးငါးခြောက်ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဆိုင်ထဲကနေ အတင်းဆွဲခေါ်ရိုက်ကြတာ။
MGZ- သူပဲသူပဲ ဆိုတာ ဘာအကြေင်းအရာကို ပြောတာလဲဗျ။
TTA- အမထင်တာတော့ အမလုပ်တာ ဘာမှမရှိတာ။ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ အချဉ်ပေါင်းဝေတာပဲရှိတာကို ။အရင်ရက်တွေက တောက်လျောက် ဆန္ဒပြတဲ့ဆီလိုက်ပြီး နှစ်ရက်လောက်နေတော့ ဈေးရောင်းထွက်တယ်။ လူတွေကလည်းရောဂါက ကြောက်ကြ။ ဝေမယ့်သူကလည်းမရှိတော့ တကယ်တော့ ဆန္ဒပြလိုက်တာ မောလည်းမော၊မူးလည်းမူးတော့ ကိုယ်လိုပဲ ဆာမှာပဲ၊မူးမှာပဲဆိုပြီးတွေးပြီး ဝေဖြစ်တာပါ။
MGZ- ဖမ်းခံရတုန်းက ဘာဖြစ်လဲ။
TTA- ဆိုင်ထဲကခေါ်ပြီးတော့ ကောင်တစ်ယောက်က ပါးအရင်ရိုက်လိုက်တယ်။ ရဲမေသုံးယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ပါးထပ်ရိုက်တယ်၊ နောက်ကသူက လက်ကို တအားချုပ်ပြီး တစ်ယောက်က လည်မျိုကုပ်ထားတာ။ဟိုဘက်နားရောက်တော့ လက်နောက်ပြန်ခတ်ပြီးအချုပ်ကားပေါ်ခေါ်သွားတယ်။ အချုပ်ကားပေါ်တော့ ရေတိုက်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့သူရှိသလို၊မကောင်းတဲ့သူလည်း ရှိတယ်။
TTA - လေယာဉ်ကွင်းထိခေါ်သွားတယ်။ ဘယ်မှာနေတယ်၊ဘာရပ်ကွက်လဲ၊မိဘက ဘယ်သူလဲ။အိမ်တွေမေးပြီး လက်မှတ်ထိုးပြီး မိန်းမတွေကိုစုပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်၊ မိန်းမတွေက အယောက် ၈၀ လောက်ရှိတယ်။
MGZ- အမတို့မိသားစု အတွက် အလှူရှင်တစ်ယောက်လှူမယ်လို့ကြားတယ်။
TTA- မနက်ကတော့ ကျွန်မအမျိုးသားဆီ တစ်ယောက်ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မစေတနာအလျောက် ရောင်းမယ့်ထဲက လှူတာပါ။ ဘာမှ မျှော်လင့်တယ်ရယ်မဟုတ်ပါဘူး။
#MonywaGazette #အချဉ်ပေါင်းသည် #မတင်တင်အေး
လှည်းတန်းမှာ သေနတ်ထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်
ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက လှည်းတန်းဈေးရှေ့မှာ သေနတ်မှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေက ဝမ်းနည်းကြောင်းအထိမ်းအမှတ်ပွဲ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကို ဆုတောင်း အမျှဝေပေးတာ၊ မီးပူဇော်ပြီး ကုသိုလ်ပြုပေးတာတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၈ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့တဲ့ အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှု ချက်ချင်းရပ်ဖို့ ကုလ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တောင်းဆို
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုတွေ တိုးလုပ်လာနေတာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချလိုက်ကြောင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူတွေအပေါ် အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းနေတာကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ တနေ့လုံး နိုင်ငံတဝန်းက နေရာ အများအပြားမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြသူတွေကို ရဲနဲ့ စစ်တပ်က အသက်သေစေနိုင်လောက်တဲ့ အားသော်လည်းကောင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရစေနိုင်လောက်တဲ့ အားသော်လည်းကောင်း သုံးပြီး ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အတွက် လူ ၁၈ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပြီး ၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ် ဆိုတာကို ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအရ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က သိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ ထားဝယ်၊ မန္တလေး၊ မြိတ်၊ ပဲခူးနဲ့ ပခုက္ကူမြို့တွေမှာ ဆန္ဒပြလူအုပ်ထဲ ကျည်ဆန်အစစ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို သေဆုံးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလို့လည်း သိရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ စုဝေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်၊ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုခွင့်တွေ ရှိကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေကို စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ လေးစားလိုက်နာသင့်ပြီး အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်အောင် ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲတာမျိုး မလုပ်သင့်ကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ခံ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ မတရား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေ အားလုံးကို ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပြည်သူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေး တောင်းဆိုနေကြသူတွေနဲ့အတူ တစည်းတလုံးတည်း ရပ်တည်ကြဖို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ အခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအပေါ် တုန့်ပြန်မှုတွေလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။
အခုသီတင်းပတ်ကုန်မှာ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့က ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းခဲ့လို့ ဆန္ဒပြသူအများအပြား သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်နက်မဲ့နိုင်ငံသားတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကို ပြောင်ကျကျ ချိုးဖောက်လိုက်တာကိုပြလိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒီတာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးယူရပါမယ်။
ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကို တရားမဝင်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဟာ တရားဝင်မှု (Legitimacy)ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်အင်အားသုံးတာတွေ ချက်ချင်းရပ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ စုဝေးခွင့်ကို ခွင့်ပြုရပါမယ်။
ဥပရောပသမဂ္ဂဟာ ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်နေတဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ အခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအပေါ် တုန့်ပြန်မှုတွေလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။
ဂျိုးဆက် ဘော်ရဲလ် - ဥရောပသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီး
မန္တလေးမြို့တွင် ရဲနှင့် စစ်တပ်က စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသူများအား ခန္ဓာကိုယ် သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိထားသူများလည်းများကြောင်း
M A N D A L A Y (28-2-2021)
မန္တလေးမြို့တွင် ရဲနှင့် စစ်တပ်က စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသူများအား အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သောကြောင့် လူ (၂)ဦး ဦးခေါင်းကျည်မှန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး(ကျဆုံး/မကျဆုံး မသိရသေး) ခန္ဓာကိုယ် သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိထားသူများလည်းများကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းသာ ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိပါသည်။
အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည် စက်ဆုပ် ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးနေရသည်ကို မြင်တွေ့ရသည့်အတွက် မိမိတို့စိတ်နှလုံး ထိခိုက်ကြေကွဲရပါသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်ခြင်းမခံရသင့်ပါ။ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည် စက်ဆုပ် ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
We are heartbroken to see the loss of so many lives in Myanmar. People should not face violence for expressing dissent to the military coup. Targeting of civilians is abhorrent.
ရန်ကုန်လှည်းတန်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အခြေအနေ
ရန်ကုန်မှာ ဒီကနေ့ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာနဲ့အတူ လုံခြုံရေးတပ်တွေက အင်အားသုံး ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တာကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၃ ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ လှည်းတန်းနဲ့ မြေနီကုန်တဝှိက်မှာ သေဆုံးတာလို့ မျက်မြင်သက်သေတွေက အတည်ပြုပါတယ်။
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ရပ်တည်ချက်အပေါ် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေအမြင်
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမူကို ဆန့်ကျင်ပြီး၊ CDM မပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်ရေးလူပ်ရှားမူကိုထောက်ခံခဲ့တာက၊ သံတမန်ရေးမှာ လူထုရဲ့အောင်မြင်မူအစနဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ကျဆုံးမူနိဒါန်း ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်နေပါတယ်။
နောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်မျှော်လင့်ထားတာကို ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမူဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ နောက် လက်ရှိ Generation Z မျိးဆက်သစ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးနဲ့ အခုလှုပ်ရှားမူမှာပါဝင်နေတဲ့ ၁၉၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်က -
" ကျနော်တို့က ဒါကို ကြိုဆိုထောက်ခံတယ်ပေါ့ ။ ဘာလို့ဆို သူ့ရဲ့ စွန့်လွှတ် ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒါက ပြည်သူတရပ်လုံးဘက်က ရပ်တည်လိုက်တာပဲ။ အင်မတန် ထိရောက်ပါတယ်။ ဒါမျိုးက အင်မတန် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ။ စစ်အုပ်စု လူတစုက ဘယ်လောက်ထိ ဒုက္ခပေးနေသလဲ၊ ပြည်သူတွေက မိမိတို့ဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်ပြသနေတဲ့ အပေါ်မှာ ကမ္ဘာသိအောင် ပြောပြလိုက်နိုင်တာက သူ့အပေါ်မှာလည်း လေးစားကြည်ညိုစရာ ကောင်းသလို၊ အများကြီး ထိရောက်တာပေါ့။ အခုတော့ စစ်ကောင်စီက သူ့ကို အလုပ်ကနေ ရပ်နားလိုက်တယ်လို့တော့ ပြောတယ်။ တကယ်တန်းကျတော့ ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဲဒီ စစ်ကောင်စီကို အစိုးရအဖြစ် ဘယ်နိုင်ငံကမှ အသိမှတ်ပြုမထားသေးဘူး။ "
ဒီအပေါ်မှာ ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ကိုဥက္ကာမြတ်ကလည်း -
" မနေ့က ကျနော်တို့ Live ကို ကြည့်ခဲ့တာပေါ့။ ဒီမြန်မာသံအမတ် အလှည့်ရောက်တော့ ကျနော်တို့က အဲလောက်ကြီးထိ ထင်မထားဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ပြောတဲ့ဟာတွေ အကုန်ုလုံးက စိတ်ခံစားမှု တော်တော်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ဆုံးမှာ အရေးတော်ပုံ .. အောင်ရမည်ဆိုပြီး လက်သုံးချောင်းထောင်ပြပြီး သူပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ တော်တော်ဝမ်းသာတယ်၊ မျက်ရည်ပါကျရတဲ့အထိ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသား ကျနော်တို့အကုန်လုံးအတွက် အားအင်ဖြစ်စေတယ်။ ဒီတလအတွင်းမှာ ဒီအဆင့်လောက်ထိ ကျနော်တို့ ရောက်လာတယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲပေါ့။ "
ဒါ့အပြင် ၈၈၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် ၊ လက်ရှိ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ ကိုဂျင်မီက -
" ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်လိုက်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ တနိုင်ငံလုံး အားတက်ရပါတယ်။ နောက်ပြီး စစ်ကောင်စီရဲ့ သံတမန်ရေးက လုံးဝ ကျဆုံးမှုရဲ့အစဖြစ်သလို၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဘယ်လိုမှ နလန်မထူနိုင် တော့တဲ့ အခြေအနေတခုကို ရောက်အောင် ကျနော်တို့ တွန်းပို့သ ွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ CRPH လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ အင်မတန်မှ အရေးပါတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကနေပြီးတော့ ခုလို ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်လိုက်တဲ့ကိစ္စက အများကြီး ထိရောက်သ ွားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၃၀)နဲ့ မတူအောင်ကို ကျနော်တို့က မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လုပ်နိုင်မယ့်အရာတွေ အများကြီးရှိလာတဲ့သဘောပါပဲ။"
အဲဒီတော့ နောက်ထပ် ဘာတွေဖြစ်လာဖို့ တောင်းဆိုမျှော်လင့်ပါသလဲလို့ မေးရာမှာ ကိုဥက္ကာမြတ်က -
" ဒါက အကြီးဆုံး CDM ပဲ။ သံအမတ်တွေထဲမှာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက စစ်အစိုးရကို အာခံပြီး ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေဘက်ရပ်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ ကျန်တဲ့ သံအမတ်တွေလည်း အချိန်မီ ပြည်သူဘက်ရပ်ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ CRPH ရဲ့တရားဝင်မှုကို ဆက်မြှင့်ပြီးတော့မှ နိုင်ငံတကာဖိအားတွေ မြန်မြန်ရဖို့ လိုတယ်။ ရက်ကြာသွားရင် ပြည်သူတွေ အထိအခိုက်ပိုများလာမှာ စိုးတယ်။"
ကိုဂျင်မီကလည်း ကျန်တဲ့သံရုံးတွေ အနေနဲ့ CDM လုပ်ကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
" ကျန်တဲ့နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတွေကလည်း ပြည်သူ့အခွန်ဘဏ္ဍာနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဲဒီသံရုံးတွေ အပေါ်မှာ သစ္စာရှိဖို့ပဲ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက အလုပ်ဖြုတ်တာတွေ ဘာတွေက ဘာမှ တရားမဝင်ဘူး။ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ သံအရာရှိအားလုံးရဲ့ အချုပ်လည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ CRPH က ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စ တွေလည်း အများကြီးရှိလာမှာ။ "
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အစိုးရအပေါ် ဒီတခေါက် စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တာက လက်ရှိမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှာ အရင်ကမျိုးဆက်တွေအပြင် နိုင်ငံတကာကပါ ပိုပြီး ထောက်ခံလာနေပါတယ်။
၀င်းမင်း/ VOA Burmese
ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ဘဏ်တွေအနေနဲ့ အီလက်ထရောနစ် စနစ်နဲ့ ငွေပေးချေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ကနေ မတ်လ ၁ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်မယ့် ရုံးတွင်းညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ကို ဘီဘီစီကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီညွှန်ကြားစာကို လက်ခံရရှိတဲ့ အကြောင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ ဘဏ်ရုံးခွဲ မန်နေဂျာတစ်ယောက်က ဘီဘီစီကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။
ငွေသားသုံးစွဲမှု လျှော့ချရေးကို အဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ အစိုးရဌာနတွေရဲ့ ငွေပေးချေမှုတွေကို CBM-NET System ကိုသုံးပြီး ဘဏ်ရှိစာရင်းတွေကနေတဆင့် ငွေပေးချေတဲ့နည်းလမ်းတွေ၊ အီလက်ထရောနစ် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေ၊ မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေ၊ Cheque/PO တွေကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ATM ကနေ ငွေထုတ်ယူမှုကို တစ်ရက်ကို အများဆုံး ကျပ် ၅ သိန်းသာ ထုတ်ယူခွင့်ပြုဖို့ ညွှန်ကြားထားသလို ဘဏ်စာရင်းကနေ ငွေထုတ်ယူတဲ့အခါ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက် တစ်ပတ်ကို အများဆုံး ကျပ် သိန်း ၂၀ နဲ့ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် တစ်ပတ်ကို အများဆုံး သိန်း ၂၀၀ အထိသာ ထုတ်ယူခွင့် ပြုဖို့ကိုလည်း အဲဒီစာထဲမှာ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
အစိုးရဌာနတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့လကုန်ရက်မှာလုပ်ခ၊လစာပေးချေမှုတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးဘဏ်တွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့ ငွေကြေးလက်ကျန် အခြေအနေအရ စိစစ်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ လိုအပ်ပါက ဗဟိုဘဏ်ကို တင်ပြဆောင်ရွက်ဖို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ သံရုံးဝန်ထမ်းတချို့ကို ရာထူးပြောင်းရွှေ့ ခန့်အပ်ကြောင်း ညွှန်ကြားစာကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
သံမှူးကြီး အဆင့်ကနေ စလို့ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အတွင်းဝန်အဆင့်၊ ရုံးအုပ်၊ စာရေးအဆင့်အထိ သံရုံးဝန်ထမ်းတချို့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပြန်လည် ခေါ်ယူပြီး ရာထူးနေရာ ပြောင်းလဲ ခန့်အပ်လိုက်တာပါ။
သူတို့ရဲ့ နေရာတွေမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လူတွေကို အစားထိုး ခန့်အပ်လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ အလွတ်သဘော အစည်းအဝေးမှာ စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်ပြီး CRPH ကို ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုတော့ တာဝန်ကနေ ရပ်စဲကြောင်း နောက်တနေ့မှာပဲ ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားဆန္ဒပြဖြိုခွဲခံရမှု လူ ၄၀ ထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံရ
မြစ်ကြီးနားမြို့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို တားဆီးနေတဲ့ ခရစ်ယာန်သီလရှင်တဦး (ဓာတ်ပုံ Mustard Seed for Life Myanmar/Feb 28th, 2021)
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့က ဒီကနေ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသပိတ်စစ်ကြောင်းကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ဖြိုခွင်းခဲ့ရာမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလို လူအများအပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဒီကနေ့မနက် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသပိတ်စစ်ကြောင်းကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ပစ်ဖောက်ဖြိုခွင်းခဲ့တယ်လို့ သပိတ်ဦးဆောင်သူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။
“အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ ဒီမနက်ပိုင်းကနေပြောမယ်ဆိုရင် ကျမတို့စုရပ်အနေနဲ့ Plan A-B ထားရှိတယ်ပေါ့။ Plan A-B ထားရှိခဲ့ပေမဲ့ သပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင် ကားတွေအများကြီးနဲ့ ပထမစုရပ် Plan A ဖြိုခွဲခံရတယ်ပေါ့နော်။ ပြီးရင် Plan B အနေနဲ့ ကျမတို့ပြန်စုတဲ့အခါ ရဲတွေက အဲဒီ Plan A နေရာမှာမစုတော့ဘဲနဲ့ ဒီ Plan B ကို အကုန်လုံး ဝိုင်းရံပြီး ကျမတို့ရဲ့ဒီစုရပ်ကို ပြန်ပြီးဖြိုခွဲပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးတော့ Plan B စုရပ်မှာပဲကျမတို့ အကုန်ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ အထက (၁)ကျောင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့အုပ်စုတခုကတော့ အဝိုင်းခံနေရတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ အခုအနေအထားကျတော့လည်း အကုန်လုံးလည်း ပြန်သွားကြပြီ။ အဲဒီလိုရှိပါတယ်။ ဖြိုခွဲတော့ ကျမတို့ ဒီ လမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုတော့ စစ်ကားရယ် ပြီးတော့ ရဲတွေရယ်-အများကြီး ဝန်းရံပြီး သေနတ်သံတွေနဲ့ပေါ့နော်- ခြိမ်းခြောက်တာမျိုးတို့၊ ပစ်တာမျိုး။ မျက်ရည်ယိုဗုံးပေါ့နော် အဲဒီလိုပစ်တော့ ကျမ တို့ လူစုကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။”
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေ သပိတ်တွေကိုဖြိုခွင်းရာမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိသလို (၄၀) ဦးထက်မနည်းအဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ သပိတ်ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောပာတယ်။
“ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတာကတော့ စုစုပေါင်း (၄၈) ယောက်ရှိပါတယ်ဗျ။ ဒဏ်ရာရတာ ကျနော်သိတာ က (၅) ဦးပေါ့။ (၄) ယောက်ကတော့ သာမန်ဒဏ်ရာထိထားပြီး တယောက်ကတော့ လောလောဆယ်ဆယ် ပြင်ပဆေးရုံမှာတင်ထားပါတယ်။”
ဒီနေ့ ဆန္ဒပြပွဲဖြိုခွင်းခံရအပြီး လူအများအပြားဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထဲမှာ သတင်းထောက်တဦးလည်း ပါသွားကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲမှသတင်းယူနေတဲ့ သတင်းထောက် တဦးကပြောပါတယ်။
“သူက အရှေ့ကနေမပိတ်ဘဲနဲ့ အနောက်ကနေ ရာဘာသေနတ်က လူစုခွဲတယ်လေ ပစ်တယ်။ ပစ်တော့ အဲဒီ လူစုကပြန်ကွဲသွားတယ်။ ကျနော့်ရှေ့မှာပဲ ဒဏ်ရာရသူ (၃) ယောက်လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီအနားမှာက ဘုရားကျောင်း တခုရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဘုရားကျောင်းထဲကိုပြေးဝင်တယ်။ ဘုရားကျောင်းကိုတော့ သူတို့ (၄) ဘက် ပိတ်လိုက်တယ်။ ပေးမထွက်ဘူး အကြာကြီးပဲ။ အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကလည်း ကား (၂) စီး (၃) စီးလောက်ရှိတယ်။ 74 မီဒီယာ မြစ်ကြီးနားအခြေစိုက်ပေါ့။ အဲဒီက ကင်မရာမင်းတယောက်ပါသွားတယ်လို့ ပြောပာတယ်။”
အဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြို့သူမြို့သားတွေရော ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေရော ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ PCG ကပါ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
လက်ရှိအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေဆဲပဲလို့ PCG အဖွဲ့က ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာကပြောပါတယ်။
“သူတို့ ထောင်ထဲ ပို့လိုက်ပြီ။ ဒီနေ့ အယောက် (၄၀) လောက်ရှိတယ်ထင်တယ်။ အားလုံးပွဲသိမ်းတဲ့အခါကျမှပဲ သပိတ်သိမ်းတဲ့အခါကျမှပဲ ပြောရမယ်။”
ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ဝိုင်းမော်၊ ပူတာအို၊ ဗန်းမော်မြို့က ဆန္ဒပြလူထုတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က လူစုခွဲဖို့ ပြောဆိုပြီး ဆက်လက်ဆန္ဒမပြနိုင်ဖို့ ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ကလည်း ဝိုင်းမော်မြို့ဆန္ဒပြပွဲမှာ သပိတ်စစ်ကြောင်းဖြိုခွင်းခံရပြီး သပိတ်ဦးဆောင်သူ မူလတန်း ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါ်လငန်လွမ်းနော်နဲ့ ဒေသခံအမျိုးသမီးဒေါ်ဇတန်းဇယ်ညွယ်တို့ နှစ်ဦးကို မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်၊ မိုးညှင်းနဲ့ ပူတာအိုဘက်တွေမှာ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ (၅၀) ကျော် အဖမ်းဆီးခံနေရတယ်တယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။
မနေ့ကလည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီ၊ မြိတ်နဲ့ ထားဝယ် စတဲ့ မြို့အတော်များများမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီး ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကို တုတ်ကိုင်၊ သေနတ်ကိုင် ရဲတွေ၊ အရပ်ဝတ်တွေက အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ပစ်ခတ် ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး ဖြိုခွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာအများပြား ရရှိခဲ့သလို အဖမ်းဆီးခံရတွေလည်း များပြားလာနေပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က တပ်မတော်ကနေ အာဏာထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ သမ္မတအပါအဝင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသလို တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးမှာ ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြမှုတွေရှိလာပြီး ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်း တိုးလာနေပါတယ်။
ဆန္ဒပြမှုများ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခံရ တနိုင်ငံလုံး ၂၀ ဝန်းကျင်သေဆုံး
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့က လှည်းတန်း ၇ လမ်းထိပ်မှာ သေနတ်ကျည်ဆံ ထိမှန်ခံရသည့် ဆန္ဒပြလူငယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အာဏာပိုင်တွေ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုကြောင့် တနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်လူ ၂၀ ဝန်းကျင် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်နက်ကိုင် လုံခြုံရေးတွေ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေသုံး လိုက်လံဖြိုခွင်းတဲ့ကြားမှာပဲ ဆန္ဒပြသူတွေကလည်း အခွင့်အရေးရသလို ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
လှည်းတန်းနဲ့ မြေနီကုန်းတဝိုက်မှာ ဆန္ဒပြ သူတွေကို ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် သေဆုံးတယ်လို့ အတည်ပြုနိုင်သူ ၃ ယောက်ရှိပါတယ်။ လှည်းတန်းဘက်မှာ အထပ်မြင့်တိုက်ပေါ်ကနေ ဆန္ဒပြသူတွေကို ချိန်ပစ်တယ်လို့ လှည်းတန်းမှာနေသူတွေက ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီမှာ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်လူငယ် ၂ ယောက် သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မြေနီကုန်း ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်မှာလည်း သေနတ်ထိမှန်လို့ ကျောင်းဆရာမတယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက် အစောပိုင်းထဲက ဆန္ဒပြမယ့်သူတွေ လူစုနေတဲ့ နေရာတွေကို လုံခြုံရေးတွေက မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေသုံး လူစုခွဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့မှာလည်း ဆန္ဒပြသူတွေကို ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတဲ့အတွက် ဦးခေါင်းကို သေနတ်ထိမှန်သူ ၂ ယောက်အပါအဝင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။
မန္တလေးမြို့လမ်းတွေထဲ လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးတွေ ဝင်လာလို့မရအောင် ပြည်သူတွေကလည်း အတားအဆီးတွေလုပ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
“”မနက်ပိုင်းကလည်း အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်တဲ့
ဆရာဝန်တွေ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို မန္တလေးကုတင် ၃၀၀ ဆန့် ဆေးရုံဝန်းထဲကနေ အပြင်မထွက်နိုင်အောင် လုံခြုံရေးတွေက ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းရောက်မှ ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
ပခုက္ကူမြို့က စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်း မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်လူစုခွဲတဲ့အတွက် သေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၁ ယောက်နဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူတယောက်ကို လုံခြုံရေးတွေက ခေါ်သွားတယ်လို့လည်း မြို့ခံ မျက်မြင်တွေက ပြောပါတယ်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း မြိတ်မြို့မှာလည်း ဆန္ဒပြသူတွေ သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ် လူစုခွဲဖမ်းဆီးပါတယ်။ လောလောဆယ် သိထားသလောက် မြိတ်မြို့မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးသူ ၅ ယောက်ထက်မနည်းရှိပါတယ်။ ထားဝယ်မြို့မှာတော့ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုကြောင့် ၃ ယောက်ထက်မနည်း သေဆုံးတယ်လို့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဒေသခံသတင်းမီဒီယာတွေက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စုအပါအဝင် အရပ်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းထဲက ထားဝယ်မြို့ပြည်သူ ထောင်သောင်းချီ နေ့စဉ် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုကြောင့် ပဲခူးနဲ့ မော်လမြိုင်မြို့တွေမှာလည်း သေဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ သတင်းထွေ ထွက်နေပေမဲ့ လောလောဆယ် အတည်ပြုလို့ မရသေးပါဘူး။ ခုလို နိုင်ငံအနှံ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို လက်နက်ကိုင်အာဏာပိုင်တွေက ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းသလို အတော်များများလည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ သတင်းထောက် ငါးဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ မြေနီကုန်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြပွဲသတင်းယူနေတဲ့ သတင်းထောက်များကို တွေ့ရစဉ် / Photo: RFA
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ဒီနေ့မနက်က စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ သတင်းယူနေရင်း ဖမ်းဆီးခံ လိုက်ရတဲ့ သတင်းထောက် ငါးယောက်ရှိပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့က သံတော်ဆင့်သတင်းဌာနက ကိုရဲရင့်ထွန်း၊ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ 74 မီဒီယာက မောင်ပေါင်လန်း၊ ရန်ကုန်မြို့က ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ရှင်မိုးမြင့်၊ ချွန်းဂျာနယ်က ကိုကျော်နေမင်း နဲ့ ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့ မြေလတ်အသံ သတင်းဌာနက ကိုဇေယျာမြင့်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် မနေ့က အဖမ်းခံထားရတဲ့သတင်းထောက် ရှစ်ယောက်ထဲက မုံရွာဂေဇက်က အယ်ဒီ တာချုပ် ကျော်ကျော်လွင် ခေါ် ကိုကိုလေး၊ မကွေးမြို့ မြေလတ်ဂျာနယ်က သတင်းထောက် မဇာဇာ တို့ကတော့ လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့သတင်းထောက်တွေကတော့ မလွတ်သေးပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်းဆန္ဒပြပွဲမှာ သတင်းယူနေတဲ့ မြန်မာနောင်းက သတင်းထောက် မကေဇွန်နွေး၊ MPA ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုရဲမျိုးခန့်၊ အေပီ က သတင်းထောက် ကိုသိန်းဇော်၊ ဆဲဗင်းဒေးက သတင်းထောက် ကိုအောင်ရဲ၊ ဇီးကွက်သတင်းဌာနက ကိုဟိန်းပြည့်ဇော် ၊ ကချင်ပြည်နယ် ဟားခါးတိုင်းမ်း သတင်းဌာနက အယ်ဒီတာချုပ် ကိုပါပွီး တို့ မလွတ်သေးတာပါ။ ရန်ကုန်က အဖမ်းဆီးခံသတင်းထောက်တွေ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ရှေ့နေတွေနဲ့ မိဘတွေက ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ဟားခါးတိုင်းသတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် ကိုပါပွီးကို ဒီနေ့နေ့လယ် ၂ နာရီမှာ ပြန်လွှတ်ပေးမယ့်အကြောင်း ရဲစခန်းက အကြောင်းကြားလာတယ်လို့ အဲဒီသတင်းဌာန အယ်ဒီတာ KB Thawng က ပြောပါတယ်။
ကနေဒါသံရုံး - ရန်ကုန်
၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၁
ရန်ကုန်နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ အင်အားသုံး နှိမ်နှင်းခြင်းများ တိုးပွားလာခြင်း တို့ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာရရှိခြင်းများ ဖြစ်ပွားရကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် ကနေဒါ သံရုံး အနေဖြင့် များစွာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေး ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ လိုလားချက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့် ဆန္ဒပြရင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားရသူများ၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိကြရသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်တူရှိနေပါသည်။
လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြသူများကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်အားသုံးခြင်း၊ ဆန္ဒပြသူများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ၊ အရပ်ဘက် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ၊ သတင်းထောက်များနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးခြင်းများ၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချလိုက်သည်။
စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဆန္ဒပြသူများအား တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းအား ယခုချက်ချင်းပင် ရပ်တန့်ရန်နှင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများကို လွှတ်ပေးရန် ကနေဒါသံရုံးမှ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ယခုချက်ချင်းပင် အင်တာနက် အပြည့်အဝ ပြန်ပေးရန်နှင့် လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ထားမှုများအား ပယ်ဖျက်ပေးရန်လည်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အစောပိုင်း ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် လတ်တလော ပြောကြားချက်ကို ထပ်လောင်း ပြောကြားလိုသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် မြန်မာပြည်သူများနှင့် အတူတကွ ရပ်တည်မည် ဖြစ်သည်။
Embassy of Canada - Yangon
The Embassy of Canada is appalled byatrend of increased violence and use of force against protesters in Yangon and across the country, resulting in tragic loss of life and many injuries.
Our thoughts are with those killed or injured while protesting asameans to voice their aspirations forareturn to democratic governance in Myanmar.
We unequivocally condemn any use of force by security forces against unarmed protesters, as well as ongoing arrests and detentions of protesters, politicians, civil servants, civil society activists, journalists and pro-democracy leaders.
The Embassy of Canada calls on the military and police to refrain from and to cease immediately all attacks, intimidation and threats against protesters, and to release those detained. We call for the immediate restoration of full internet access and rescinding of all social media restrictions.
We reiterate Canada’s earlier statements, echoed recently at the UN General Assembly: Canada stands with the people of Myanmar.
Embassy of Canada to Myanmar
Photo-San Yu Kyaw
မန္တလေးမြို့တွင် ရဲနှင့် စစ်တပ်က အင်အားသုံး လိုက်လံဖြိုခွဲနေသော်လည်း စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်
မန္တလေးမြို့တွင် ရဲနှင့် စစ်တပ်က အင်အားသုံး လိုက်လံဖြိုခွဲနေသော်လည်း စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဖမ်းဆီးထားသူများအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြသည်။